Lahatsoratra nosoratan'i Prasanna Chitanand
Nanjary nalaza ny fiposahan'ny fanadihadiana mialoha amin'ny marketing mailaka, indrindra amin'ny indostrian'ny e-commerce. Ny fampiasana ny teknolojia ara-barotra vinavina dia manana fahafahana hanatsara ny tanjona, ny fotoana ary amin'ny farany mamadika orinasa bebe kokoa amin'ny alàlan'ny mailaka. Ity teknôlôjia ity dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny famantarana ny vokatra mety hovidin'ny mpanjifanao, ny fotoana mety hividianany azy, ary ny atiny manokana izay hitarika ny hetsika. Inona no atao hoe Marketing Marketing? Tetikady vinavina ny marketing